सडक दुर्घटना : नियति कि कमजोरी ? | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
सडक दुर्घटना : नियति कि कमजोरी ?
२०७६ पुष ४, शुक्रबार ०८:५८ गते
राष्ट्रिय अभिलेख भन्छ– सन् २०१६/०१७ मा जम्मा सवारी ५५३० दुर्घटना भए । पैदलयात्रीमात्रै १८२ प्रभावित भए । गम्भीर दुर्घटना २०१ र सामान्य दुर्घटनामात्रै ३९१४ भएका थिए । त्यसको सापेक्षमा सन् २०१७/२०१८ मा दुर्घटना घट्नुको सट्टा बढ्दो क्रममा रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा ६३८१ सवारीसाधन दुर्घटनामा परे भने पैदलयात्री १९४ जना प्रभावित भएका थिए । २१९ गम्भीर दुर्घटना भएका थिए भने सामान्य दुर्घटनामात्रै पनि ४३३३ भएका थिए । सन् २०१८ जुलाईदेखि २०१९ जनवरीसम्म भएका दुर्घटनामा नेपालमा ११४६ जनाले ज्यान गुमाए । नेपाल प्रहरीका अनुसार आव ०६९/०७० र ०७४/०७५ मा भएका ४० हजार ७७७ दुर्घटनामा ८ हजार ९८२ जनाको मृत्यु भएको थियो । यसरी हेर्दा त्यस अवधिमा वार्षिक करिब दुई हजार र दैनिक पाँच जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुुमाए । पछिल्लो तथ्याङ्कले दैनिक नेपालमा सडक दुर्घटनाकै कारण अकालमा सात जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यो पनि आश्रित जनशक्तिभन्दा आश्रय दिने युवाजनशक्ति ज्यादा रहेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ । अझ मोटरसाइकल दुर्घटनामा निधन हुने झन्डै ९० प्रतिशत युवा उमेरसमूह नै रहने गरेको छ । यसले उत्पादनको अर्थशास्त्र नै तरगित बनेको तथ्य हामीसामु छ । यस आर्थिक वर्षको अभिलेख आउने संघारमा छ, तथापि दुर्घटनाहरुको चापलाई हेर्ने हो भने यस आर्थिक वर्षमा पनि दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो क्रममा नै रहने संकेत देखिएको छ ।
ट्राफिक सचेतना, रिफ्रेस सेन्टरको व्यवस्था, मापसे परीक्षण, चालकसँग सल्लाह आदि कार्यक्रमको प्रभावका कारण केही समयावधि दुर्घटना न्यूनीकरण भए पनि पुनः कार्यक्रममा शिथिलता पैदा हुनासाथ दुर्घटनामा वृद्धि हुनपुग्दा ज्यान गुमाउनेको संख्या घट्नुको सट्टा ग्राफ चढ्दो गतिमा छ । यसैवर्षको हकमा पनि दसैँ लाग्दै गर्दा ट्राफिक प्रहरीको विशेष कार्ययोजनाका कारण सानातिना दुर्घटना भए पनि ठूला–ठूला सडक दुर्घटना हुन पाएनन् । तर, जब दसैँ सकियो तब यस कार्यक्रममा पनि शिथिलता आयो । फलतः सँगसँगै ठूला–ठूला दुर्घटनाहरु घट्न थाले । यसैको पछिल्लो दृष्टान्त बनेको छ, गत मंसिर २९ गते बिहान मुडेबाट भक्तपुर आउँदै गरेको मिनीबस सिन्धुपाल्चोकमा दुर्घटित हुँदा १५ जना यात्रुले ज्यान गुमाए । मंसिर महिनाकै दोस्रो हप्ता मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत बाग्लुङ–बुर्तिबाङ सडकखण्डमा जिप दुर्घटना भयो, जसले १४ यात्रीको अकालमै ज्यान लियो । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका ४, पैयुँपाटाबाट बाग्लुङको निसीखोलाका लागि प्रस्थान गरेको बस सडकबाट तल खस्यो । यसअघि पनि कातिक १७ गते सिन्धुपाल्चोककै सुकुटेमा दुर्घटना भयो, जुन दुर्घटानामा परी १७ जनाले यो जन्मको जीवनलीला टुङ्ग्याए ।
सरकारले प्लेन दुर्घटना हुनासाथ त्यसको जाँचबुझका लागि आयोग गठन गर्ने तर एउटै सडक दुर्घटनामा पनि दुई दर्जनभन्दा पनि अधिक मानिसको दुर्घटना हुँदा पनि त्यसका निम्ति ठोस पहलकदमी नलिने चलनलाई चिर्दै यसपटक भने प्रधानमन्त्री ओलीले दुर्घटना हुनाका कारणहरु खोजी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ । यसले सरकारी तहबाट न्यूनीकरणका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु मौसमीरुपमा मात्र नभई सदाबहाररुपमा सधैँसधैँ नै हुनुपर्ने संकेत गरेको भए पनि यसको प्रभाव कति रहने हो त्यसको परिणाम हेर्न कुर्नैपर्ला । तर, वर्तमानसम्म भएका अध्ययन र अनुभवले दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण चालकको लापर्बाही नै हो भन्नेमा दुईमत रहेको देखिन्न ।
खासमा चालकको कमजोरी भनेको सडकको अवस्था, यातायातका साधनहरुको चाप र प्रतिचापको आँकलन नै नगरी अत्यधिक गतिमा सवारी चलाउनु हो । आपूmभन्दा अगाडि कुदिरहेका गाडीलाई उछिन्न विपरीत दिशाबाट गाडी आइरहे-नरहेको वा कुनै रोकेर राखिए-नराखिएको अवस्थाको विश्वसनीयता जा“च्दै नजा“ची ओभरटेक गर्नु पनि चालकको अक्षम्य कमजोरी हो । प्रायः ठूला सवारीसाधनका चालकले साइकलयात्री र मोटरसाइकलयात्रीलाई सवारीसाधनमा गणना नै गर्दैनन् । उनीहरुलाई ग्राभेलसम्मै खँदेडेर ओभरटेक गर्छन् । मोटरसाइकलवालालाई जोगिने र जोगाउने अवसरसम्म दिँदैनन् । अरुलाई यस्तो परिस्थिति सृजना गर्नु, मादक पदार्थ सेवन गरी गाडी चलाउनु, आप्mनो सिटछेउ युवतीलाई राखेर उसस“ग इसारा गर्दै र गफ पनि गर्दै गाडी चलाउनु, सहचालक वा अन्य कुनै यात्रीस“ग गफ गर्दै सवारी चलाउनु अनिँदै अनिँदै धेरै दिनसम्म गाडी चलाउनु पनि उनीहरुका ठूला लापर्बाहीपूर्ण कमजोरी हुन् ।
अर्को कुरा, प्रायः चालक भएकाहरु सानैमा घर छोडेर हिँड्नाले सामाजिकता र मानवीय संवेदना बुभ्mन र अनुभूत गर्न पाएका हुँदैनन् । त्यसैले, त्यस्ता परिवेशमा हुर्केकाहरु यात्रुप्रति असहिष्णु र रूखो व्यवहार गर्छन् । आप्mनो जीवनको त्यति माया गर्दैनन् । शिष्टाचार, प्रेम, सम्मान र इज्जत आदिप्रति बेपर्वाह रहन्छन् । उनीहरुलाई छोराछोरी र सामाजिक जीवनको दायित्वबोध त्यति रहेको हुँदैन, सानैदेखि मायाममता नपाई हुर्केकाले अरुका जीवनप्रति त्यति पर्वाह राख्दैनन् । सानैमा घर छोड्नाले पढ्ने वातावरण नपाएको हु“दा ट्राफिक नियमको पूर्णज्ञान त्यति हुँदैन । कहिलेकाही“ सहचालकलाई सवारी चलाउन दिन्छन् । यदाकदा यात्री, स्टाफ वा अन्य कोहीसँग भनाभन भई चालक तनावमा रहेका हुन्छन् । अघिजाने र धेरै यात्रु पाउने आशामा आपसी होडबाजीमा साधन गुडाउँछन् । कथंचित दुर्घटना भइहाले उन्मुक्ति पाइने चरहरु थाहा पाइरहेका हुन्छन् । यसैले गैरजिम्मेवार भई साधन चलाइरहँदा यस्ता दुर्घटनाका शृंखला दोहोरिहन्छन् । पढेलेखेका समझदार तथा उत्तरदायित्वबोध भएका चालक भएमा अपवादमा बाहेक आप्mना कारणले दुर्घटना हुन दिँदैनन् । यसैले आधारभूत शिक्षा हाँसिल गरेको, मनोवैज्ञानिकरुपमा स्वस्थ, संवेदनशील, अनुुशासित र पारिवारिक दायित्वबोध भएको व्यक्तिमात्र चालक बन्न पाउने नीति निर्माण गर्नु अपेक्षित भएको हो ।
हुन त, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी चढेको हेलिकप्टर पाथिभराबाट रवाना भएर काठमाडौँ आउने क्रममा दुर्घटित हुँदा उनीसहित हेलिकप्टरमा सवार सबैको ज्यान गएको थियो । त्यसमा मौसम प्रतिकूल हुनु त एउटा मह¤वपूर्ण कारण छँदैछ नै, सँगसँगै हेलिकप्टरको सिट क्षमता र सिट संख्याभन्दा पनि बढी यात्रु बोकेको तथ्य खुल्न आएको थियो । यसैले सवारीसाधनको सिट र भारवहन क्षमताभन्दा अधिक संख्यामा यात्रु बोकेर यात्रा गर्दा सवारीसाधन दुर्घटित हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सडक दुर्घटना हुनमा यातायात व्यवसायी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यात्री खचाखच भरेरमात्रै चलाउन निर्देशन दिनु, लामो दूरीमा चल्ने यात्री तथा मालवाहक साधनहरुमा एक जना ड्राइभरको मात्र व्यवस्था गर्नु, उनीहरुलाई रातभरि चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्नु, गाडीका ट्युब–टायर खिएर पातलो भइसक्ता पनि नफेरीकन त्यही जोगाड गरी चलाउन लगाउनु, तराईको बाटोमा काम नलाग्ने भएका, २० वर्ष नाघेर अब राजधानीमा गुडाउन नपाइने भएपछि ल्याइएका सवारीसाधनहरुलाई झन् पहाडी इलाकामा गुडाउन दिनु, टायर, मेसिन आदिको नापजाँच नै नगरीकन स्टार्ट भए चलाउन लगाउनुजस्ता कारण दुर्घटना हुनुमा बढी जिम्मेवार छन् । जस्तो कि, बेनीदेखि मुक्तिनाथजस्तो जोखिमयुक्त बाटोहरुमा चल्ने, दलदलेदेखि बुलिङटारतिर चल्ने सवारीसाधनको कण्डिसन हेर्ने हो भने यो तथ्य छर्लंगै हुन्छ ।
सांसद् र सरकारमा दूरदर्शिता त्यति देखिन्न । बनाउँदै गर्दा नै ढिलो होस् राम्रो होस् भन्नेभन्दा पनि आप्mनो पालोमा ट्रयाक खोलेको भन्ने गराउन पाए चुनाव जितिरहिन्थ्यो भन्नेमात्रै छ । त्यसलाई सुदूर भविष्यसम्मका निम्ति उपयोगी बन्न सक्ने गरी बनाउने कुरामा उनीहरुको चिन्तन त्यति गम्भीर बन्न सकेको देखिँदैन । त्यस्ता सा“घुरा, कच्ची, अक्करमय उकाली र ओराली सयौ“ घुम्ती भएका बाटोमा कुन मोडलको, कति यात्रीमात्रै अट्ने, त्यसलाई कति वर्षमात्रै त्यो सडकमा गुडाउन पाइनेजस्ता विषयमा कडा नीति तथा कानुन बनाउनैपर्ने हो, तर सम्बन्धित निकायको त्यसमा ध्यान गएको देखिँदैन ।
यद्यपि, चालकको लापर्बाहीका अतिरिक्त प्रशासनिक र प्राविधिक कारण पनि कम छैनन् । ट्राफिक प्रहरी नै सडक कानुन परिपालना गराउने निकाय हुन् । यिनीहरु नै किन खुम्चिस् मरिचे आप्mनै रागले भन्ने उखानझैँ आप्mनै लोभीलालची र लामा हात गर्ने बानीले कमजोर र लाचार निकाय बन्न पुगेका छन् । कसैले टेर्दैन यिनीहरुलाई । दुई–चार पैसा थमाइदिए सबै कानुनको रीत पुग्छ र सबै ट्राफिक नियम आकर्षित हु“दैन गल्ती गर्नेलाई । अलिअलि बिल काट्यो अलिक धेरै खल्तीको खाडल पु¥यो । यस्तो प्रवृत्तिकै कारण दिनहु“ ट्राफिक नियम अनदेखी गरिदिँदा कयौ“ स्थानमा दुर्घटना भइरहेछ । कतिपय अवस्थामा नदेखेजस्तो गरिदिँदा नै सवारी चालकको मनोबल बढ्ने गरेको छ । अहिले स्कुटरको बिक्री तीव्र गतिमा बढेको छ । सामान्य चलाउन जानेपछि मूल सडकमा ल्याई बेपर्वाहसँग दौडाउने प्रवृत्ति चुलिँदो छ । चौध–पन्ध्र वर्षकै ठिटाहरुले आप्mनो बलले डो¥याउनै नसक्ने खालका ठूला मोटरबाइक साइलेन्सर झिकेर द्रुत कुदाउने गर्दा गाउँसहर नै आतंकित बन्ने गरेको छ । यसले मोटरसाइकल मोटरसाइकलमै ठोक्किएको दुर्घटनाको दरमा वृद्धिमात्र गरेको छैन, सडक मृत्युदर पनि बढाइरहेको स्थिति छ ।
हुन त, कच्ची त्यसमा पनि पहाडी घुमाउरो, साँघुरो र भत्किएको पुल र पुलेसाहरु नभएको बाटो पनि मुख्य कम कारक छैनन् दुर्घटना हुनमा । यस्ता विकट हिमाली तथा पहाडी भेगको भौगोलिक अवस्था र त्यहा“ निर्मित बाटो दुर्घटना हुनुका कारणहरुमध्ये एउटा मुख्य कारण मान्ने गरिएको भए पनि तराईका विशाल पथहरु पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमै पर्ने गरेका छन् ।
पूर्वपश्चिम हाइवेभित्रै फराकिलो खुल्ला र राम्रा बाटोहरुमा पनि धेरै सवारीसाधन दुर्घटनाग्रस्त फेला पर्दछन् । यसबाट दुर्घटना सडकको कारणभन्दा पनि ज्यादा चालककै लापर्बाहीका कारण घट्ने गर्दोरहेछ । त्यो भनेको ट्राफिक नियम पालना नगरेको र अनिद्रा, थकान आदि कारणले भएको हो भन्दा फरक पर्दैन । पहाडी भूभागमा ज्यादाजसो पुराना सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने गरेका कारण दुर्घटनाग्रस्त हुने गरेका छन् ।
यसमा स्वयं यात्री पनि दोषी छौँ । सबैलाई पर्खने र अर्कोमा जाने धैर्य नै छैन । जसरी भए पनि छिट्टै पुग्नुपर्ने हतारो छ हामीलाई । गाडीको क्षमता र अवस्था नै नहेरी चढिरहेका हुन्छौ“ हामी कोचाकोच र ठेलमठेल गर्दै, उस्तै परे छतमा र पछाडि झुन्डिएर पनि । अनि ट्राफिकले रोकेमा उल्टै उसैमाथि खनिन्छा“ै र गालीगलौचमा उत्रिन्छौ“ पनि । दुर्भाग्यवश दुर्घटना भइहालेमा तिनै ट्राफिक र सरकारलाई धारे हात लाउ“दै सत्तो सराप गर्दछौ“ आफैँ ।
यसैले हामी पैदलयात्री, मोटरयात्री, साइकल, मोटरसाइकलदेखि सबै सरोकारवाला पक्ष सबैले थोरैधेरै ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरिरहेकै हुन्छौ“ । हामी सबै सचेत हुन सक्यौ“ भने स्वतः दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सक्तछ । यसलाई रोकथाम गर्ने भनेको हामी सचेत नागरिकहरुकै हो, तापनि यसमा सर्वाधिक जिम्मेवारी चालक, यातायात व्यवसायी, ट्राफिक र सरकारको हुन आउ“छ । सरकारले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नुपर्छ । यो उसको मुख्य दायित्व पनि हो । यसका निम्ति उसले नियम कानुन कडाभन्दा कडा बनाउनेदेखि त्यसलाई निष्पक्षतापूर्वक कडाइका साथ लागू गर्ने कर्तव्य हुन आउ“छ ।
दण्ड जरिवाना थोरै र कारबाही प्रभावकारी नभएको भनी सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि सरकारले अघिको सापेक्षमा केही नियममा संशोधन गरेको छ भने दण्ड जरिवानालाई दोब्बर बनाएको छ । तर पनि दिनहु“ सडक दुर्घटना बढ्दो ग्राफमा देखिनुचाहिँ चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यसर्थ, गत दसैँतिर जस्तै गाडीको कन्डिसनको परीक्षण, गतिको रेकर्ड र निश्चित दूरी पार गर्न लाग्ने समयको निर्धारण र त्यसको पालना भए÷नभएको मापन तथा विश्लेषण, सवारीको सिट क्षमताअनुरुप यात्रु संख्याको निर्धारण, निश्चित संवेदनशील क्षेत्रमा नो ओभरटेकको नियम पालना भए÷नभएको हेर्ने, गाडीमा गतिको अभिलेखीकरण यन्त्र राख्ने, अनियन्त्रित गति स्वचालितरुपमा नियन्त्रण गर्ने प्रविधि र यन्त्रको जडान गर्न लगाउने, अनपेक्षित तीव्र गतिमा चलाए यात्रुले थाहा पाउने गरी ध्वनि प्रवाह हुने यन्त्रको जडान गर्न लगाउने र यात्रुलाई पनि यसबारे सचेत गराई कथंञ्चित यस्तो साइरन बजेमा तपाईंहरुले पनि चालकलाई सचेत र जिम्मेवार बनाउन सघाउनुुपर्छ भनेर प्रशिक्षित तुल्याउन सकिएमा यात्रा सुखद बन्न सक्छ । सरकारले मुग्लिन–नारायणगढ सडकखण्डको सुधार विस्तार गरेपछि त्यहाँ हुने दुर्घटनामा केही कमी आएको छ । यसैगरी, पूर्वपश्चिम लोकमार्गको काम द्रुत गतिमा भइरहेको हुँदा अन्यत्रका मार्गहरुको स्तरोन्नति गर्ने र बाटोको स्तर, गुण र क्षमताअनुरुपका कन्डिसनका सवारीसाधनमात्रै सिट संख्याअनुरुप यात्रु चढाई योग्य चालकलाई मात्रै चलाउन दिने नीतिको सही कार्यान्वयन गर्ने हो भने यस्तो मर्मान्तक पीडाका खबरहरु सुन्न र आपैmँ पनि त्यसको सिकार हुनबाट जोगिने छौँ ।